Karelia liba nokuningi zithandwa yizivakashi bayathanda ukuchitha iholide yabo ngokwemvelo, lihaqiwe izihlahla ezinhle kakhulu, amahlathi kanye namachibi. Le ndawo ekahle abathanda ongaphandle futhi kulabo abathanda ukuthula nokuzola - imvelo Karelian inama zasemazweni ocebile nobuhle.
Kuleso simo, uma - a fan of lolu hlobo iholide, ukuzilibazisa isikhungo (Sortavala, Karelia), uzothola indawo ekahle vacation.
Isikhathi esingcono kakhulu ukuhamba kuyinto ehlobo, ngoJulayi. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi zasehlobo kukhona eyesikhashana - kubalulekile "catch" okwamanje. Ekuqaleni kuka-July, efudumele ngokwanele - izivakashi ungagxambukeli ukushisa ecasulayo, futhi umoya ukukhanya kwenza ukuhamba emaphandleni ezimnandi nakakhulu.
I ukuzijabulisa umhlabeleli
Karelia nemvelo yayo enhle abakwazi ukugwema ukunakwa zezivakashi. Ngenxa okusezingeni eliphezulu ezindaweni traffic insimu yalo sidalwe uxhaxha amahhotela, lezisekelo amatende nekukhibika jikelele. Iningi lazo zitholakala emzini Sortavala. Amahhotela (amanani) nokuzijabulisa ngezisusa okunomsoco nezimo zokuphila uyothola uhlu olungezansi:
Ladoga Manor. Ihhotela Village siyindlela esikhulu isihambi isabelomali nge induduzo anda. Izivakashi angakhetha izinhlobo eziningana yokuhlala, futhi ujabulele emangalisayo ukuzijabulisa ezisekelweni, ezisebenza endaweni izindlu. Ngakho, ihhotela inikeza eziyinkimbinkimbi sauna, ichibi, ithuba ukuthatha uhambo ukudoba, vakashela uhambo eziningi ezithakazelisayo. Izindleko yokuhlala obubodwa ngo Cottages engcono ezisukela 18 kuya kwezingu-90.
"Black Stones". Lesi sivumelwano itholakala emaphethelweni emzini Sortavala. Nezokungcebeleka isikhungo "Black Amatshe" iseningizimu indawo amazing nge imvelo ocebile futhi aluhlaza. Kumila iyajabula ukuhlela izinkambo engcono kwenye yezindawo ezinhle kakhulu eRussia - Marble Canyon "Ruskeala". Leli phuzu bafakwa encwadini okubhalwa kuyo ngomnotho kazwelonke wezwe lakithi. Minyaka yonke izinkulungwane zabantu izivakashi. Ekugcineni kukhona eyinkimbinkimbi ehhotela, igumbi lokudlela, zinabantu labapheki best of Sortavala, kanye ezindaweni eziningana izingane. Bekanye rangers abanolwazi, amadoda uzokwazi ukuya ukuzingela, futhi abadobi bendawo sizobonisa engcono okudoba amabala. Amanani lapha okulula engezansi: ngobusuku obubodwa izobiza kusuka 4 kuya kwezingu-35. Intengo kuhlanganisa eziningi amasevisi eyengeziwe: ukudla, internet, uvakashele isigaba ukuzijabulisa.
Izinzuzo Uyahlanganyela Karelia
Ukonga imali. izikhungo nezokungcebeleka emhlabeni Sortavala Ningakhokhi kakhulu, futhi izimpilo edolobheni elincane uyosindisa ibhajethi yakho - ungenayo ukhokhe isizumbulu semali ukuze ngemgwaco nendawo service.
umoya ohlanzekile. ubunjalo Kushunyayelwe inama ebumsulweni nasebunyeni futhi freshness, ukujula izitshalo. Abaningi isaziso sokuthi lapha emoyeni uyakwazi ukwelapha izifo, futhi uhlale kule ndawo kuba nomphumela omuhle empilweni jikelele umuntu. Shono sanatoriums eziningi zakhiwa zaba Karelia, etholakala kulo lonke izwe - iningi labo eyasungulwa emakhulwini eminyaka adlule.
nature enhle. Ngenxa sezulu layo nokungcebeleka (Sortavala) abakwazi ukuqhosha esiphehla izimbali exotic ku imbali imibhede kahle manicured, kodwa ungathola lenqwaba zinhlobo nezihlahla emahlathini kanye eziningi amapaki edolobheni. Izitshalo kukhona curvy kakhulu, ezinye zazo ahlelwe njengoba ezisengozini. Ngaphezu kwalokho, yonke indawo kule ndawo iyinombolo omkhulu, egcwele esobala emifuleni yamanzi crystal nasemachibini amaningi.
Climate futhi imvelo endaweni
Climate Sortavala imnene, ngokulinganisela. Isikhathi esingcono ukuvakashela kuyinto Julayi. Nokho, kuwufanele ukukhumbula ukuthi ehlobo buhlala - ngo-August lapha ukuqala nezimvula ezinkulu kanye nokupholisa kakhulu.
Lemvelo e Karelia ufanelwe ngokumthanda - sibonga imvelo acwebile futhi amahlathi aluhlaza nge izimila ocebile, umuzi hhayi ezingcoliswe imfucuza zamakhemikhali. Umoya ucwengile futhi fresh - kuba lubonakale kokubili emahlathini nasemizini weRiphabhulikhi.
Izivakashi ikakhulu edolobheni elihle Sortavala. Nezokungcebeleka isikhungo, etholakala endaweni ezungezile, kuzokwenza ukuthi imizwelo eyakhayo kuphela.
Uhambo kuya uBhalami. Ukuvakashela zethempeli lasendulo ngendlu esiqhingini Lake Ladoga - lena kuhambo olukhulu, hhayi nje kuphela kubantu yenkolo, kodwa futhi wabathanda emlandweni kanye nokuphila emphakathini lasendulo. Abaqondisi Professional uyokwethula inkulumo nawe ekuphileni eBandleni, uyosingatha amaphuzu ezithakazelisayo kakhulu kulesi siqhingi.
Ruskeala. Marble Canyon itholakala eduze nedolobha Sortavala. Nezokungcebeleka isikhungo, etholakala eduze komuzi, ahlele cishe njalo ihlele ukuthi umhosha. Izimfunda eziluhlaza zasemazweni imvelo isetshenzwe ihlanganisa ithrekhi ezincane izivakashi, bewitching ngobuhle bazo. Esobala namanzi aluhlaza anombala ocwazimulayo nezimagqabhagqabha enhle kokukhanya kwelanga, okubonisa bushelelezi, namatshe amhlophe ambiwa.
izimpophoma Karelian. Republic eziningi imifula, amachibi kanye nezinye machibi. Uma unquma ukuvakashela idolobha efana Sortavala, ukuzilibazisa isikhungo, lapho kuzohlala, uhlele uhambo elimangalisayo zonke ezinkulu izimpophoma of Karelia.
Amanani ziyahlukahluka kakhulu kuye ehhotela olikhethile noma ukuzilibazisa. Nokho, izindleko isilinganiso ophilayo (ubusuku) ku Sortavala ehhotela kusiqinisa ruble 5000 ngaphandle kwamasevisi ezengeziwe. Kuleso simo, uma ufuna ukulondoloza, kufanele sinake base amatende. Lapho, uyothola enikezwa umhlabeleli. Kubalulekile nokukhumbula ukuthi Sortavala (ukuzilibazisa kanye nokuvakashela) kuyokulahlekisela ezishibhile.
Ukufunda Izibuyekezo zezivakashi ngokuvakashela Karelia, iningi bafuna ukuhamba. Karelia - endaweni ezimangalisayo, wamukele ngenjabulo noma yiluphi isivakashi. uhlobo yendawo kanye izakhiwo abanamabhizinisi edolobheni bangazithola kusimangaze wonke umuntu. Sortavala (amahhotela, amanani kanye nokungcebeleka izikhungo, okuyinto zitholakala lapha) - enhle kakhulu ithuba izindleko, kodwa iholidi engqondweni yami!
Lolwandle Paid "Sunny", Novoaltaisk
Amanzi epaki "iplanethi", Ufa: isithombe, ikheli, ukubuyekezwa
Primula obkonika: incazelo, ukutshalwa imbewu ekhaya
Miusskaya Square, eMoscow
Ukhaphethi Turkish. okunethezeka Ezenziwe Ngesandla aseMpumalanga
Snowmobiling izingane, noma yingcweti expanses seqhwa